Kulankii Barlamaanka ee ansixinta Miisaaniyada 2013 oo buuq ku soo xirmey – idalenews.com
Kulankii Barlamaanka ee ansixinta Miisaaniyada 2013 oo buuq ku soo xirmey
Waxaa maanta kulan ku yeeshay xarunta golaha shacabka Qaranka ee magaalada Muqdisho kulan ay iskugu yimaadeen xildhibaanada Baarlamanka Somalia kaasoo uu shir gudoominayey Gudoomiye ku-xigeenka Baarlamanka Jeylaani Nuur Iikar.
Dhageyso Ibbi oo weerarey hadalka Cismaan Libaax oo ka hadlaayey yareynta safaaradah Somalia ee dibada
Ajendaha looga hadlayey kulanka maanta aya waxaa uu ahaa miisaaniyada sanadka 2013 ee xukuumada oo qoraalo ku saabsan loo qeybiyey xildhibaanada maalmo ka hor, waxaana kulankaas ka qeyb galay wasiirka Maaliyada iyo qorsheynta. Hoolka baarlamanka ayaa waxaa qabsaday mar kaliya Buuq iyo sawaxan ka dib markii qaar ka mid ah xildhibaanada ay muran badan ka keeneen qaabka loo soo diyaariyey miisaaniyadaas oo ay sheegeen iney tahay mid cadaalad daro ah oo qaladaad badan uu ka muuqdo.
Wasiirka Maaliyadda iyo Qorsheynta Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Maxamuud Xasan Saleebaan uga jawaabay mudaneyaasha Baarlamaanka dhamaan su’aalihii ay weydiiyeen, isagoo sharraxaad ka ka bixiyey cabashada ay muujiyeen mudaneyaasha Baarlamaanka ee Miisaaniyadda sanadka 2013-ka.
Xildhibaan ka tirsan baarlamanka ayaa sheegay in miisaaniyadaan xuquuqdooda lagu duudsiiyey ciidamada dowlada loona qoray dhaqaale aad u yar halka xafiisyada madaxweynaha raisul wasaaraha loo qoray lacago aad uga fara badan oo caqliga ka baxsan, waxaana markii dambe kulanka deg deg u soo xiray gudoonka baarlalamanka oo sheegay in doodu ay halkeeda ka sii socon doonto, maalinta beri ah.
Madaxweyne Xasan oo kulamo la qaatey dhigiisa Uganda Yuweri Musaveni
Madaxweyne Xasan oo khudbad dheer u jeediyey Jaaliyada Somalia ee ku nool Uganda